कृषि खबर – Page6– rastriyakhabar.com
निबुवा खानुहुन्छ ? फाइदाबारे जानीराख्नुस्
नेपालीहरुको महान चाड दशै अझै सकिएको छैन । दशमीको दिनदेखी पूर्णिमासम्म टिका लगाउने र ठूला बडाको आर्शिवाद लिने चलन रहेको छ । तपाईको घरमा पनि दशैं अझै सकिएको छैन होला । आफन्त र परिवारले तपाईको घरमा रमाइलो भइरहेको होला । दशैंमा मासुलाई विशेष परिवारको रुपमा लिइन्छ । तर अष्टमीकै दिनदेखि घरमा मासु खाँदा..
सबैको चाहना हुन्छ घरवरिपरी बगैँचा बनाउने र फूल रोप्ने । गाउँघरतिर खेतवारीमा पनि प्रशस्त मात्रामा फूल रोपिन्छ । ग्रामीण भेगको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा फूलको खेती कम गर्ने गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रमा पनि घरका कौसीमा र जग्गा भाडामा लिएर नर्सरी सञ्चालन गर्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । साथै..
बुधबार, अशोज १५, २०७६ मा प्रकाशित
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकका किसान कफीखेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । एक पटक रोपेपछि ३५/४० वर्षसम्म उत्पादन दिनुका साथै वृद्धवृद्धा र केटाकेटीले समेत दाना टिप्न सक्ने सजिलो खेती भएकाले किसान कफीखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । जिल्लामा एक करोड ३२ लाख मूल्य बराबरको ३० मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएको..
चट्याङ लागेर १५ भेडा मरे
बुधबार, अशोज ८, २०७६ मा प्रकाशित
कैलाली । कैलालीको जानकी गाउँपालिका–९ कटासेमा वर्षासँगै मंगलबार परेको चट्याङ लागेर १५ भेडा मरेका छन् । पानी पर्न थालेपछि साजको रुखमा ओत लागेको अवस्थामा सोही रुखमा चट्याङ खस्दा भेडाहरु मरेको अमरावती प्रहरी चौकीले जानकारी दिएको छ । जानकी गाउँपालिका–९ बक्लौवा शिविरका विपतराम चौधरीका भेडा जङ्गलमा..
लालीगुराँसमा हुन्छन् यस्ता औषधीय गुण, कसरी गर्ने प्रयोग ?
लालीगुराँस नेपालको राष्ट्रिय फूल हो । लालिगुराँस नदेख्ने सायदै नहोलान् । यसलाई देखे पनि यसको फाइदा बारे जो कोहीलाई थाहा नहुन सक्छ । लालीगुराँस देख्नमा जति सुन्दर हुन्छ, स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै फाइदाजनक हुन्छ । पहाडी तथा हिमाली भु–भागमा लटरम्म फुल्छ लालिगुँरास । गर्मीमा लू, रुघाखोकी,..
अण्डाको लागतअनुसार मूल्य कायम गर्न किसान र व्यसायी सहमत
काठमाडौँ । नेपाल दाना, अण्डा, कुखुरा वितरक सङ्घ केन्द्रीय समितिले अण्डाको नयाँ मूल्य कायम गरेको छ । सङ्घले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा किसान र व्यवसायी बीचको सहमतिपछि नयाँ मूल्य कायम गरिएको हो । नयाँ मूल्यअनुसार अबदेखि उपभोक्ताले प्रतिगोटा १२ रुपैयाँमा अण्डा..
कृषिले समृद्ध बनेको डेनमार्कबाट नेपालले के सिक्ने ?
हिमाल कोइराला । वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेसिने नेपालीहरुको संख्या पछिल्ला केही वर्षयता बढ्दै गएको छ । रोजगारीका लागि भन्दा पनि अध्ययनका क्रममा धेरै नेपाली युरोप तथा अमेरिका पुग्ने गरेका छन् । अध्ययनका लागि विदेसिन चाहने नेपाली युवाको गन्तव्य मुलुकको रुपमा केही वर्षयता भने युरोपेली..
लसुन-प्याजका यति धेरै फाइदाहरु
शुक्रबार, भदौ २७, २०७६ मा प्रकाशित
लशुन प्याजमा शरीरलाई फाइदा गर्ने महत्वपूर्ण गुण हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।लशुनमा कीटाणुहरूलाई मार्ने विशेष तत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले आफ्नो अनुसन्धानबाट देखाएका छन् । लशुनमा शरीरभित्र रहेका कीटाणुलाई मार्ने तत्त्व मात्र होइन, शरीरमा बढी मात्रामा रहेको एक प्रकारको बोसो कम..
खाद्य अधिकार खाद्य सम्प्रभुुता कार्यान्वयन गर्न सकिएला ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ माखाद्य सम्बन्धीहकको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येकनागरीकलाई खाद्य सम्वन्धीहकहुनेछ । प्रत्येक नागरीकलाई खाद्य बस्तुको अभावमाजीवनजोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षितहुने हकहुनेछ । प्रत्येक नागरीकलाई कानुनबमोजिमखाद्य सम्प्रभुताको हकहुनेछभन्ने कुरा शुनिश्चित गरेको छ..
परिदृश्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोबार सुरु
काठमाडौं । केही संस्थाका बचतकर्ताले बचत रकम नपाएर दिक्क छन् भने केही संस्था बन्द भएको भएको छ । यस्तै भएको छ, परिदृश्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा । बिगत ७ बर्ष बन्द भएको कालिमाटीमा रहेको परिदृश्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पुनः संचालनमा आएको छ । परिदृश्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बिशेष साधारणसभाले..
सरोकार समाजद्वारा गोठगाउँमा पहिलोपटक दुर्लभ प्रजातिका बिरुवा रोप्ने कार्य सम्पन्न
हरेकको भान्सामा, हरेक छाक पाक्छ आलु । आलुको अनेक परिकार बन्छ । आलुलाई जसरी पनि खान सकिन्छ । उसिनेर खाए भयो । प|mाइ गरे भयो । अरु तरकारीसँग मिसाउन सकियो । अचार बनाएर खान सकियो । तरकारी, खाजा सबै रुपमा आलु उपयोगी हुन्छ । पाचन यन्त्रमा सुधार, उच्च रक्तचाप नियन्त्रण, प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन आलु उपयोगी..
गोलभेडाले छालालाई फाइदै फाइदा
सोमवार, असार ३०, २०७६ मा प्रकाशित
गोलभेडामा लाइकोपेनको मात्रा अत्यधिक हुने भएका कारण यसले छालाको समस्याहरुलाई टाढा राखी तपाईंको सुन्दरतालाई निखार्ने काम गर्दछ । यसका साथसाथै यसले तपाईंको छालालाई चम्किलो बनाउनुका साथै गोरो पनि बनाउँदछ । यसले तपाईंको कपालमा कन्डिसनरको काम गरि कपाललाई चम्किलो र नरम बनाउन सहयोग गर्दछ । गोलभेडाले..
सामान्यतया अचार खान बाहेक यसको अरु कुनै उपयोग हामी त्यति गर्दैनौं । तर पुदिनाको प्रयोगले मानव स्वास्थमा धेरै भन्दा धेरै फाइदा गर्दछ । पुदिनाको प्रयोगबाट हुने कही फाइदाहरुः मुहारमा आउने डण्डिफोर र खिलबाट छुटकाराः पुदिनाको पातहरु सँगै ३ थोपा जती कागतीको रस मिलाएर मुहारमा लगाउने र पाँच मिनेट पछि..
आरु खाएर लिन सकिन्छ यि ५ फाइदाहरु
गर्मी मौसममा पाईने फलहरु मध्ये एक हो आरु । गाउँघरका कुना कन्दरातिर पनि सजिलै पाईने यो फल स्वादका लागि खाने गर्छौँ । तर यसको फाइदाको बारेमा पनि जानिराख्नु आवश्यक हुन्छ । आरुमा प्रचुर मात्रामा कार्बोहाइडे«ट, प्रोटिन, मिनरल्स र फाइबर पाईन्छ जसले शरीरलाई निकै लाभ दिन्छ । आज हामी आरुबाट पाईने फाइदाको..